Sony NEX-7: Ukucaciswa, izithombe kanye nokubuyekeza
Sony - omunye ehamba phambili abadlali global emakethe amadivaysi e-elekthronikhi. Oholela isikhundla inkampani futhi ingxenye kwemishini for izithombe. Phakathi ethandwa kakhulu eRussia futhi emhlabeni yohlobo olufanele amadivayisi Sony - Sony Alpha NEX ikhamera 7. Yiziphi izici zako ezisemqoka? Yiziphi zako ezisemqoka yokuhlulwa esincintisana nabo?
Masitadishe ukuqala okuthile, yini isakhiwo ukulethwa ikhamera ungakuphi. Yamadivayisi apharathasi 2 izinguqulo main - Sony NEX 7 Kit, futhi NEX 7 umzimba. Umehluko phakathi kwabo ukuthi kusikophu kwezidingo zedivayisi sokuqala lens. Ebhokisini ngedivayisi elihambisana uhlobo yomsebenzisi, ngaphandle umkhiqizo ngokwayo, ngeke, ngaleyo ndlela, uhlobo lens 18-55, ishaja, ikhebula ukuxhumana, flash. Ngokuvamile, iqoqo izakhi oluphakeme ejwayelekile.
Amanye ama-elementi enikeziwe Sony NEX 7 - ibhethri, isibonelo, angabhekwa ngokwanele ukwahlukahlukana. Zingaba namanye NEX umugqa amadivayisi. Ngu ezifanele izingxenye uhlobo ingase ihlanganise futhi ukuvimba iyunithi. analogs wayo ingatholakala kalula ezinhlwini zamakhulu abathengisi ethandwa. Ngazuza ngoba NEX iyunithi 7 amandla supply futhi angase afanelekele amadivayisi ezifana Sony NEX 3, 5, 6. Kungaphawulwa ukuthi kwezinye ikhamera ngombala kwahambisana izincwajana ewusizo futhi ukushayela software ezikhethekile. Kodwa ngisho noma akusiyo ebhokisini elihambisana uhlobo lohlelo ingalandwa kusukela website Sony sika.
Funda ikhamera ukhiye izici Sony NEX 7. Labo kungenziwa singamelwe ohlwini olulandelayo:
- ikhamera iyahambisana lens ne-Sony E insabule;
- devaysa isinqumo matrix 24,7 megapixels (kuhlanganise ngempumelelo -. 24.3 megapixel) .;
- kudivayisi inkomba kwezitshalo isici 1.5;
- nokukhawulela Uhlaka isinqumo kusekelwa ikhamera, - 6000 4000 Amaphikseli;
- devayse ukufakwa matrix uhlobo CMOS;
- ikhamera inebanga inkomba ukuzwela kusuka 100 kuya 1600 ISO, kukhona ukusetshenziswa kwe-ISO enwetshiwe;
- idivayisi ikuvumela ukuthi usebenzise ukuthola ngokuzenzekelayo ibhalansi elimhlophe, bawubeka ngesandla noma khetha uhlu Ukuhlelwa;
- idivayisi has a flash esakhelwe ibalwa ngokudubula into ngaphakathi ibanga 6 m;
- kwenza othomathikhi isivinini ikhamera ukudubula 10 FPS, apharathasi inesibali for 2 imizuzwana-10;
- idivayisi ifakwe i kusitholi sokubonwayo electronic isinqumo 2.359 MF, futhi ikubonisa LCD isinqumo 0,9216 MP sesikrini-3 intshi kungaba rotated;
- ukubonisa we ukuchayeka ikhamera 30 - 1/4000 imizuzwana;
- ivumela idivayisi ukudubula ividiyo nge isinqumo kuze kube 1920 by 1080 Amaphikseli 60 ngesekhondi, uma ngokudubula e HD yohlelo elihambisana Inkomba zingancishiswa 50;
- ikhamera Ungarekhoda izithombe JPG ne-RAW uhlobo lwefayela.
Sizokwenza ukufundelwa izici eziningi imininingwane zedivayisi - ukuqala nge ukubukeka kwakhe.
Sony NEX ikhamera 7 Unomzimba eyenziwe magnesium Alloys. Idivayisi kuyinto ngempela ezisindayo. Okunye amakhamera NEX umugqa idivayisi izici ngohlobo olukhethekile kusitholi sokubonwayo, khona Izilawuli ezengeziwe, ikhi lokuhambisa. Ikhamera ukhululekile ukubamba - sibonga Ergonomics yayo, kanye nokuba khona izingxenye iraba ku izingxenye zomzimba, ngokuvamile nabo nengalo photographer.
Phambi umshini ahlelwe, ngaphandle lens 2 umbhobho ihlanganiswe autofocus okukhanyisa isici, futhi isignali okushisa avela akude control umamukeli. Le ndawo oyinhloko ngemuva Sony NEX 7 devaysa kuthatha esibukweni. Ngqo ngenhla kuba kusitholi sokubonwayo, inkinobho flash kusebenze futhi eyinhloko idivayisi idluliselwe mode sokudlala. Ngakwesokudla kwesikrini kukhona inkinobho ne lapho umsebenzisi angakwazi ukulawula ezinye izici ezithandwayo - ezifana, isibonelo, ukugxila imodi noma vimbela Auto ukuchayeka. In the endaweni kukhona izakhi ambalwa ukuphathwa umshini ophathwa ngesandla, ejwayelekile ikhamera yalolu hlobo. Ohlangothini kwesokunxele chassis efakwe USB ezisezingeni futhi HDMI, kanye Isixhumi i-microphone zangaphandle. Kulokhu, zonke zazo embozwe panel olukhethekile plastic.
Phezulu iyunithi zonke ejwayelekile kuhle - amasondo lapha zitholakala isici control, flash kanye okhiye ambalwa. Ezansi izindlu ahlelwe nezixhumi ukufakwa module ibhethri kanye inkumbulo flash endaweni efanayo iyona isikhulumi yangaphakathi.
Isikrini kanye kusitholi sokubonwayo
Sony NEX ikhamera 7 Kukhona i screen LCD nge idayagonali 3 amayintshi futhi isinqumo 0,9216 MN. Kungase kuqashelwe ukuthi uhlobo olufanayo-matrix ehilelekile futhi Encane NEX umugqa amadivayisi. Isikrini inikeza izithombe sokudlala eliphezulu kakhulu ngaleso ebanzi kakhulu wokubuka engela kwenza kube ukhululekile ukubuka okuqukethwe e Ukukhanya kwelanga.
Ngakwelinye ihlangothi, idivayisi esebenza ngesisekelo uhlobo kusitholi sokubonwayo OLED-matrix. Liphinde lunikeze esihle ikhwalithi yesithombe ngaphansi kwanoma yiziphi izimo zokukhanya. Kepha enezinto eziningi izici ukusebenza - isibonelo, isikhathi eside ngokwanele ukulanda isithombe ukukhethwa ngokuzenzekelayo ukuchayeka kanye Ukuphendula enganele kushintsha uzimele zisuswe - isithombe esisha e kusitholi sokubonwayo yakhiwe kwesinye isikhathi kungangenzeki kakhulu ngokushelela. Ngaphezu kwalokho, njengoba kwaphawula u-ezinye izazi, uma ngokudubula endlini, abasebenzi imibala Fluorescent, Shake abalulekile isithombe kusitholi sokubonwayo kungenzeka.
Ikhamera ifakwe umthamo webhethri ka 7.7 W / h. Lena sibalo sibe nesizotha. Wamemezela ngumkhiqizi isikhathi wokusebenza ezizimele zedivayisi - 335 ozimele. Kufanele kuqashelwe: nesilinganiso ipharamitha okuhambisanayo ngazo ukuphila kwebhetri yalolu hlobo kwekhamera, practice inombolo kungenzeka kakhulu kunokujwayelekile kushiwo. Ngalo mqondo, idivayisi Sony sika iyathinteka - njengoba ochwepheshe uqaphele, ikhamera uyakwazi ukudubula ngaphandle lingatshajwa izisebenzi mayelana 520. Ongoti futhi omuhle esikalini eliphezulu ngokwedlulele ukunemba ibhethri zamanje ekusebenzisaneni ikhamera - ivumela photographer ukuhlela kahle umsebenzi wabo.
Ngokufunda ukuthi yini functionalities eziphawuleka kakhulu libhekene Sony NEX 7 ikhamera.
Okokuqala, kufanele kuphawulwe ukuthi kule divayisi unika photographer ikhono lokusebenzisa izindlela eziningana okwandisa uhla ashukumisayo.
Okokuqala, kungaba okumele zenziwe yi-software ukucutshungulwa ozimele, phakathi kwesikhathi lapho ukuchayeka is kushintshwe ukuhlanganisa nezinga ukukhanya kuma naphakathi othomathikhi. Okwesibili, le ndlela ingasetshenziswa uma umsebenzi esetshenziswa HDR, ngokuhlanganisa 3 ozimele ukuthi abe ukuchayeka ezahlukene.
sici operation Landelayo devaysa - 6 kungenzeka ngokuhlanganisa ozimele etholwe sokudubula othomathikhi. Lolu khetho kungaba kakhulu ukunciphisa umsindo ezithombeni.
Enye ewusizo sicutshungulwa ikhamera - ukulungiswa Image nge esakhelwe interface isofthiwe kudivayisi. Ukuzibandakanya Wakhe can ugcine kakhulu isikhathi photographer - uma umsebenzi okuhambisanayo ayisekelwe yidivayisi, umsebenzi efanayo ngokuvamile eyenziwa i-PC esebenzisa ekhethekile ihluzo abahleli.
Enye esiphawulekayo-Sony NEX 7 ikhamera - inyunyana isibhamu yonke indawo engezansi. Sony besilokhu ibhekwa njengenye yezinto brand uhola ngokwemibandela ukuqaliswa imisebenzi efana - ngakhoke okuqukethwe etholwe wasebenzisa le ndlela has eliphezulu kakhulu.
Izici ezingokoqobo ukusetshenziswa devaysom
Manje ukufunda lokho ezicashile esiwusizo sokuba nezinto eziqondile kokusebenzisa ikhamera. Okokuqala, phawula ukuthi ungaqala ngokudubula kamuva emhlabeni 0,64 emva idivayisi. Lesi sibalo kungase kungabi evelele kunazo zonke - izixazululo eziningi ukuncintisana usebenze kangcono, kodwa ukuthi kwamukelekile ukuba zimo kakhulu ukubandakanywa ikhamera practice.
Omunye ethandwa kakhulu ongakhetha kudivayisi - sokudubula othomathikhi. Ngokuvamile, it is kwenziwe izindlela ezintathu eziyisisekelo - ngokubhalela ifomethi ifayela le-JPG ne kokucindezelwa ubuncane, lapho ebhala umbhalo ogcinwayo idatha ngefomethi RAW, futhi kumodi kuhlanganiswe - futhi ne kokucindezelwa aphansi. Ngokwe-izici kushiwo, i-Sony NEX ekamelweni 7 anganikeza othomathikhi isivinini sokudubula 10 FPS. Ngakho kungaba umkhuba?
Njengoba kuboniswa ukuhlolwa kwenziwe ongoti, idivayisi sisonke inikeza ijubane esibekiwe sokudubula othomathikhi. Nokho, kuye ngokuthi ngefomethi yefayela esetshenziswa ziyahlukahluka inani ozimele kwelinye othomathikhi bethwebula chungechunge. Uma izithombe ezilotshwe JPEG, ke Umugqa 13 ozimele, lapho esebenzisa indinganiso RAW - 12, kanye ukubandakanywa kokubili nezakhiwo ngesikhathi esifanayo - 11.
Enye okukhulu kusukela umbono ukusetshenziswa esisebenzayo sokushona umshini - ngokugxila isivinini. kudivayisi Okubukwe kubonisa imiphumela emihle inqubo ukulinganiswa. Uma ukusetshenziswa lens for Sony NEX 7 ezisebenza ububanzi 18-55 mm, langempela waphawula ngokugxila isivinini kule ezahlukene 0,11-0,22 imizuzwana. amakhamera Abaningi e kumasegmenti ezibizayo umsebenzi kancane. Ngakwelinye ihlangothi, uma usebenzisa ilensi ogxilise njalo, lesi sibalo okuhambisanayo kungenzeka kuhlaba umxhwele ngisho nakakhulu - ku ezahlukene 0,09-0,13 imizuzwana.
kudivayisi Okubukwe, kanye namanye amadivayisi eziningi lesi sigaba, engaciba video in HD Full. Umsebenzisi futhi balungisa izilungiselelo ukuqoshwa ezifana isivinini yokushutha, beso, ukuzwela, ibhalansi elimhlophe, ukubeka kudingekile focus inketho. Kulesi umsebenzi nge izilungiselelo elifanele engenziwa ngqo endaweni lapho ividiyo isusiwe. Sound silotshwe ne ukurekhoda stereo. Kungaba ukurekhoda kokubili nge-microphone esakhelwe, okuyinto, ngokusho kongoti, abasebenza kakhulu ngalokuphumelelisako ukubandakanywa kumadivayisi angaphandle. Ngaphezu kwalokho, umsindo kwikhamera has umsebenzi njengendlela ukucindezelwa umsindo, okuyinto avele imvelo ngenxa umoya onamandla.
Yeka ukuthi kuyinto iyunithi?
Yeka ukuthi kuyinto Sony NEX kudivayisi 7? Intengo ikhamera ukuguqulwa Kit, okungukuthi, ukuba lens enikeziwe ecishe ibe yizinkulungwane 79-81. Ruble. Kuningi noma cha kakhulu? Uhlolojikelele amakhamera brand ukuncintisana, ezithinta imisebenzi efana, kusikisela ukuthi izindleko idivayisi okukhulunywa sihambisana ngokugcwele amakhono yakhe futhi izinga lomsebenzi. Photographer, ngandlela-thile, ngeke overpay zomkhiqizo - ukuzuza izimpahla ukuncintisana, ikakhulukazi isici ukusebenza kanye nokusebenza.
Manje sizothumela itadishe lokho abasebenzisi bathini mayelana Sony NEX 7. Izibuyekezo abanikazi ikhamera devaysa kungenziwa oluthathwa zibe ngalezi zigaba ezilandelayo:
- labo ukuhlola ukubonakala idivayisi, kalula ukuphathwa;
- labo abonisa imibono ukusebenza ezingeni devaysa zobuchwepheshe;
- labo baveze isahlulelo mayelana ikhwalithi yokuqukethwe wadala ngekhamera.
Ngokuqondene Izibuyekezo yohlobo yokuqala, abasebenzisi libike ukuthi idivayisi ihambisana ngokugcwele lo mkhuba eziyisisekelo emakethe ngokuya ukusetshenziswa brand esikhiqiza izindlela ezintsha ukuhlola ukuklanywa amayunithi ukukhiqizwa. Idivayisi ibukeka yesimanje futhi stylish. Ngokuphathelene lula, Sony NEX 7 ikhamera ibhukwana Izibuyekezo bezithombe mayelana nalesi sici futhi omuhle kakhulu. Izinga eliphezulu Ergonomics devaysa indawo lula main izakhi ukulawula umshini, wakhulelwa API.
Ngokuphathelene ukusebenza kanye manufacturability we abafanele kokuhlaziywa amadivayisi abasebenzisi nge ezahlukene isipiliyoni ukuzibandakanya esiwusizo sokuba nezinto eziqondile imishini yobuchwepheshe for bethwebula. Labo abantu asebethole ephethwe ukuzama abanye brand ye amakhamera, avame ukuba ezibucayi ngaphezulu amadivayisi tekusebentisa kwezobuchwepheshe mbuzo. abasebenzisi umakad 'ebona njengaye bavame ukushiya okubuyayo kulezi izici umshini. Kodwa ngokuvamile, lizinga ukusebenza kanye ikhamera ubuchwepheshe ziyahlolwa ngokugcwele kuhambisana mikhuba emakethe, futhi ngalo mqondo idivayisi, ngokuvumelana abasebenzisi, akuyona kunabayeni izimbangi zayo.
Esinye isigaba kwezimpendulo - labo abonisa imibono izinga akhiqizwa enezithombe ikhamera yevidiyo. Naphezu kweqiniso lokuthi kule sici kokuhlaziywa kungaba subjective kakhulu, izithombe namavidyo kliphu wadala nge ukubandakanywa Sony NEX 7 devaysa, kwachazwa ngokuthi kokuba izinga ithatha eliphezulu. It isetshenziswa hhayi kuphela ukuhlangabezana nezidingo abasebenzisi amateur, kodwa futhi ukwenza imisebenzi okhokhelwayo agcwele umsebenzi bezithombe abanolwazi, abese eqala nezimfuneko esezingeni photo kanye video amafayela wadala ngokusebenzisa inhlobo efanele amadivayisi.
Ubudlelwane Political: izinhlobo, sakhiwo kanye netimphawu
Ukukhiqiza imfundo uhlobo
Ukuhlaziywa situational njengethuluzi elibalulekile ucwaningo ukumaketha kule nkampani